अमेरिकन आइडलको टप पाँचमा पुगे दिवेश पोखरेल – Nepal Insider
अर्काको श्रीमानसँग रात बिताएपछि यी महिलालाई निबस्त्र सडकमा डुलाइयो !
तीन करोड लिटर पानी हालेर भरियो रानीपोखरी
लोडसेडिङको अन्त्य प्रधानमन्त्रीको परिकल्पनाले मात्रै सम्भव भयो : मन्त्री ज्ञवाली
रेल आएपछि पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने – कामभन्दा हल्ला धेरै भयो
ललितपुरमा कोरोना संक्रमणबाट ४ जनाको मृ’त्यु
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अमेरिकन आइडलको टप पाँचमा पुगे दिवेश पोखरेल
अमेरिकन आइडलको टप पाँचमा पुगे दिवेश पोखरेल
नेपाली युवा गायक दिवेश पोखरेल अर्थात आर्थर गन अमेरिकन आइडलको टप ५ मा पुगेका छन् । गत हप्ता टप ७ मा पुगेसँगै ७ जना प्रतिस्पर्धीहरुले दिएको प्रस्तुतिका लागि भोटिङ सुरु भएको थियो । सोही भोटका आधारमा दिवेश टप ५ मा पुगेका हुन् ।
आजको एपिसोडको सुरुवातमै टप ५ को घोषणा गरिएको हो । अघिल्लो साता दिवेश पोखरेल – आर्थर गन, जस्ट साम, जोनी वेष्ट, डिलोन जेम्स, फ्रान्सिस्को मार्टिन, जुलिया गार्गानो र लुइस नाइट टप ७ मा पुगेका थिए।
आजको एपिसोडमै अमेरिकन आइडलको विजेताको घोषणा हुनेछ । यी टप ५ प्रतिस्पर्धीहरुले आजको एपिसोडमा २–२ गीत गाउनेछन् । एउटा नयाँ ट्युन हुनेछ र अर्को यही सिजनको अगाडिका एपिसोडबाट लिइनेछ । यसैको आधारमा उपाधि विजेताको छिनोफानो हुनेछ ।
अमेरिकाको चर्चित अवार्ड पूर्वानुमान वेबसाइट गोल्ड डर्बीले यसअघि नै आर्थर गनलाई उपाधिका मुख्य दाबेदार भनिसकेको छ ।
चन्द्रागिरिमा मानिसमाथि आक्रमण गर्ने चितुवालाई स्थानीयले मारे
१० दिनमा अस्पताल बनाएको चीनले ६ दिनमा मास्क फ्याक्ट्री बनाउने
सरकार ढाल्न अर्बौ रकम बोकेर आएका भारतिय एजेण्टसँग प्रचण्ड र माधब पक्षको उठबस !
बैंकका कर्मचारीलाई नरोक्न गृहकाे निर्देशन